एकदिनमा कति पानी पिउने, कुन समयमा पिउने ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. एकदिनमा कति पानी पिउने, कुन समयमा पिउने ? – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पानी कति र कसरी पिउने सधैं प्रयोगमा ल्याइरहने कुरा भए पनि यो जटिल विषय हो । तर यसविषयमा विषेशज्ञहरूबीच नै एक मत छैन । वास्तवमा हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्री बस्ने क्षेत्र, मौसम र शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्छ ।
पानी किन पिउने
दिनमा कति पानी पिउने रु
केही सिद्धान्तका अनुसार हामीलाई हरेक दिन कमसेकम आठ गिलास पानी पिउनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । जसले गर्दा तपाईंको शरीर वि’षरहित, छाला पोषित हुने र हाइड्रेटेड गर्न समेत मद्धत गर्ने गर्छ । तर आयुर्वेदले यसलाई स्वीकार्दैन ।
धेरै पानी पिउनुले कफ र बात रोगको समस्या बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले शरीरमा पाचन शक्तिलाई प्रभावित गराउने गर्छ । त्यसैले पानीमा तृप्त भएपछि जबर’जस्ती पानी पिइरहनु हुँदैन ।
– यो बिर्सनु हुन्न कि तपाईंको शरीर ५० प्रतिशत भोजनबाट, २५ प्रतिशत पानीबाट र २५ प्रतिशत पाचक रसको साथमा भरिएको हुन्छ ।अनलाइनखवरबाट
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 8, 2021 April 8, 2021 222 Viewed